Itekhnoloji yokuvavanya-iNingbo Rumotek Magnetic Technology Co, Ltd.
Yonke imihla, iRUMOTEK isebenza ngokuzimisela kunye noxanduva lokuqinisekisa imveliso ekumgangatho ophezulu.
Iimagnethi ezisisigxina zisetyenziswa phantse kuwo onke amacandelo emizi-mveliso. Abathengi bethu abavela kumashishini erobhothi, amayeza, imoto kunye nenqwelomoya baneemfuno ezingqongqo ezinokuhlangatyezwa kuphela kwinqanaba eliphezulu lolawulo lomgangatho. Kuya kufuneka sinikeze ngamalungu okhuseleko, afuna ukuthotyelwa kweekhrayitheriya ezingqongqo kunye nezibonelelo. Umgangatho olungileyo sisiphumo socwangciso oluneenkcukacha kunye nokuphunyezwa ngokuchanekileyo. Sisebenzise inkqubo esemgangathweni ngokuhambelana nezikhokelo zomgangatho we-EN ISO 9001: 2008.
Ukulawulwa okungqongqo kokuthengwa kwezinto ezingafunekiyo, abathengisi abakhethwe ngononophelo kumgangatho wabo, kunye nokuhlolwa okubanzi kweekhemikhali, ukubonwa komzimba kunye nobuchwephesha kuqinisekisa ukuba kusetyenziswa izinto ezisemgangathweni ophezulu. Inkqubo yolawulo lweenkcukacha manani kunye nokutshekishwa kwezinto zenziwa kusetyenziswa isoftware yamva nje. Ukuhlolwa kweemveliso zethu eziphumayo kwenziwa ngokungqinelana nomgangatho we-DIN 40 080.
Sinabasebenzi abaqeqeshwe kakhulu kunye nesebe elikhethekileyo le-R & D elithi, enkosi ekubekweni esweni nasekuvavanyweni kwezixhobo, linokufumana uluhlu olubanzi lolwazi, iimpawu, amagophe kunye namaxabiso amakhulu kwiimveliso zethu.
Ukukunceda ufumane ukuqonda okungcono kwesigama kwicandelo, kweli candelo sikunika ulwazi oluhambelana nezinto ezahlukeneyo zemagneti, ukwahluka kwejiyometri, ukunyamezelana, amandla okunamathela, ukuqhelaniswa kunye nemagnethi kunye neemilo zemagnethi, kunye nesichazi magama sobuchwephesha. isigama neenkcazo.
I-laser granulometer ibonelela ngokulingana kobungakanani bokuhanjiswa kweenkozo zamasuntswana ezinto, ezinje ngezinto ezingavuthiyo, imizimba kunye neeceramic glazes. Yonke imilinganiselo ihlala imizuzwana embalwa kwaye ityhila onke amasuntswana kubungakanani bohlu phakathi kwe-0.1 kunye ne-1000 micron.
Ukukhanya ngumtshangatshangiso wombane. Xa ukukhanya kudibana namasuntswana asendleleni yokuhamba, unxibelelwano phakathi kokukhanya kunye namasuntswana kuya kukhokelela kunxaxho kwinxalenye yokukhanya, okubizwa ngokuba kukusasazeka kokukhanya. Ubukhulu becala lokusasazeka kukuba, ubungakanani be-particle buya kuba buncinci, encinci i-angle yokusabalalisa, ubukhulu be-particle buya kuba bukhulu. Izixhobo zokuhlalutya amasuntswana ziya kuhlalutya ukuhanjiswa kwamasuntswana ngokolu hlobo lomzimba wombane wokukhanya.
HELMHOLTZ I-Coil CHECK YEBR, HC, (BH) IMAX NOKUQHUTYELWA KWE-ANGLE
Ikhoyili yeHelmholtz ineekhoyili ezimbini, nganye inenani elaziwayo lokujika, ibekwe kumgama omiselweyo ukusuka kumazibuthe kuvavanywa. Xa umazibuthe osisigxina wevolumu eyaziwayo ubekwa embindini wezo zombini iikhoyili, ukuhamba kwemagnethi yemagnethi kuvelisa okwangoku kwiikhoyili ezinokuthi zihambelane nomlinganiso we-flux (Maxwells) esekwe ekuhambeni kunye nenani lokujika. Ngokulinganisa ukufuduswa okubangelwa yimagnethi, umthamo wemagnethi, ukungalingani kokungena, kunye nokuqina kokufumana umazibuthe, sinokumisela amaxabiso anje nge-Br, Hc, (BH) max kunye nee-engles zokuqhelanisa.
IZIXHOBO ZOKUXINELEKA NGOKUGQIBELA
Isixa sokuhamba kwemagnethi ngeyunithi yendawo ethathwe ngokungafaniyo kwicala lokuhamba kwemagnethi. Ikwabizwa ngokuba kukungeniswa kweMagnetic.
Umlinganiso wamandla ombane wamagnetic kwindawo enikiweyo, ibonakaliswe ngamandla ngeyunithi nganye ubude kumqhubi oqhuba iyunithi yangoku ngelo xesha.
Isixhobo sisebenzisa i-gaussmeter ukulinganisa ubungakanani be-flux yemagnethi esisigxina kumgama omiselweyo. Ngokwesiqhelo, umlinganiso wenziwe nokuba kukwimagnethi yomhlaba, okanye kumgama oza kusetyenziswa ukubhobhoza kwisekethe yemagnethi. Ukuvavanywa koxinano lwe-Flux kungqina ukuba umazibuthe osetyenziselwe iimagnethi zethu zesiko ziya kwenza njengoko bekuxelwe kwangaphambili xa umlinganiso uhambelana namaxabiso abaliweyo.
ULAWULO LOKUSETYENZISWA KWEKHARITYHULAM TESTER
Imilinganiselo ezenzekelayo yedemagnetization curve yezixhobo ezisisigxina zemagnethi ezinje ngeferrite, AlNiCo, NdFeB, SmCo, njl.njl. .
Sebenzisa isakhiwo se-ATS, abasebenzisi banokwenza ubumbeko olwahlukileyo njengoko kufuneka: Ngokwe-intrinsic kunye nobungakanani besampulu yokulinganisa ukugqiba ubungakanani be-electromagnetic kunye nokuhambelana kwamandla okuvavanya; Khetha iikhoyili ezahlukeneyo zokulinganisa kunye nophando ngokokukhetha kwendlela yokulinganisa. Thatha isigqibo sokuba ukhethe isixhobo ngokungqinelana nemilo yesampulu.
ITESTER YOBOMI OBUFANELEKILEYO KAKHULU (HAST)
Iimpawu eziphambili ze-HAST neodymium magnet yonyusa ukuxhathisa kwe-oxidation kunye ne-corrosion kunye nokunciphisa ukulahleka kwesisindo ekuvavanyeni nasekusebenziseni. I-10mg / cm2 yaseYurophu imigangatho: i-PCT kwi-130 ºC ± 2ºC, i-95% yokufuma, uxinzelelo lweatmosferi 3 iiyure ezili-168, ukwehla kobunzima <2-5mg / cm2.
Igama elithi "HAST" limele "Uvavanyo olukhawulezileyo lwamaqondo obushushu / noxinzelelo lokuqina." Igama elithi "THB" limele "Ubushushu bokuThatha iBala." Ukuvavanywa kwe-THB kuthatha iiyure ezili-1000 ukugqiba, ngelixa iziphumo zoVavanyo lwe-HAST zifumaneka ngaphakathi kweeyure ezingama-96-100. Ngamanye amaxesha, iziphumo ziyafumaneka nakwiiyure ezingaphantsi kwe-96. Ngenxa yokonga ixesha, ukuthandwa kwe-HAST kuye kwanda ngokuqhubekayo kule minyaka idlulileyo. Iinkampani ezininzi ziye zatshintsha iiGumbi zoVavanyo ze-THB ngee-HAST Chambers.
UKUJONGA IMAKHOSIKHOSI YOMBANE
Ukuskena i-electron microscope (SEM) luhlobo lwe-microscope ye-electron evelisa imifanekiso yesampulu ngokuyikrwaqula nge-boram ejolise kwii-elektron. Ii-elektroni zinxibelelana neeathom kwisampulu, zivelisa imiqondiso eyahlukeneyo enolwazi malunga nobume besampulu kunye nokwakheka komhlaba.
Eyona ndlela ixhaphakileyo ye-SEM kukuchongwa kwee-elektroni zesekondari ezikhutshwe ziiathom ezivuyiswe ngumqadi we-elektron. Inani lee-elektroni zesekondari ezinokufunyanwa linokuxhomekeka, phakathi kwezinye izinto, kumzekelo wendlela yokuma komhlaba. Ngokuskena isampulu kunye nokuqokelela ii-elektroni zesekondari ezikhutshiweyo kusetyenziswa isixhobo esikhethekileyo sokujonga, kuyenziwa umfanekiso obonisa ubume bomphezulu womhlaba.
UMLAWULI WOBUTYEBI BOKUGQIBELA
I-Ux-720-XRF sisiphelo esiphakamileyo se-X-reyi yokugquma ubukhulu bokulinganisa obuxhotyiswe nge-polycapillary X-ray egxile kwi-optics kunye ne-silicon drift detector. Ukusebenza okuphuculweyo kokufunyanwa kweX-ray kwenza ukugqwesa okuphezulu kunye nemilinganiselo yokuchaneka okuphezulu. Ngaphaya koko, uyilo olutsha lokukhusela indawo ebanzi ejikeleze indawo yesampulu inika ukusebenza okungaphandle.
Ikhamera yesisombululo esiphakamileyo esine-zoom yedijithali ngokupheleleyo inika umfanekiso ocacileyo wesampulu eneshumi leemicrometer ngobubanzi kwindawo yokujonga. Icandelo lokukhanyisa ukujonga isampulu lisebenzisa i-LED enobomi obude kakhulu.
IBHOKISI YOVAVANYO LWetyuwa
Kubhekiswa kumphezulu weemagnethi ukuvavanya ukunganyangeki kwezixhobo zovavanyo lokusingqongileyo kusetyenziswa uvavanyo lokutshiza ityuwa olwenziwe yimeko yenkungu yokuphambukela. Ngokubanzi sebenzisa isisombululo se-5% samanzi esinyibilikisi yetyuwa kwisisombululo sokungalingani kwexabiso le-PH (6-7) njengesisombululo sokutshiza. Ubushushu bovavanyo buthathwe ngama-35 ° C. Umphezulu wemveliso yokwaleka komhlwa kuthatha ixesha ukulinganisa.
Uvavanyo lwesitshizi setyuwa luvavanyo lokukhawulezisa olukhawulezayo oluvelisa uhlaselo olubonakalayo kwiisampulu ezigutyungelweyo ukuze kuvavanye (ubukhulu becala ngokuthelekisa) ukulungela ukutyabeka ukuze kusetyenziswe njengokukhusela. Ukubonakala kweemveliso ze-corrosion (rust or other oxides) kuvavanywa emva kwexesha elimiselweyo. Ixesha lokuvavanya lixhomekeke kukumelana nokubola kwengubo.